Prôtestantisma eto Madagasikara - Wikipedia
Ny prôtestantisma eto Madagasikara dia efa tonga teto amin' ny nosy tamin' ny vanim-potoana faha mpanjaka ka laharana faha-2 manaraka ny katôlisisma izy raha ny isan' ny mpino ao aminy no jerena. Ny prôtestantisma eto Madagasikara dia misy fiangonana maro ka ny roa voalohany tonga teto Madagasikara dia ny loteranisma (izay nipoiran’ ny Fiangonana Loterana Malagasy) sy ny kalvinisma (izay anisan' ny nipoiran' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara). Tsy ireo ihany no endrika isehoan' ny prôtestantisma eto Madagasikara amin' izao fotoana izao fa ao koa ireo fiangonana hafa izay tsy dia mahazatra ny Malagasy ny miantso azy hoe "prôtestanta" na tsy te hatao hoe "prôtestanta". Ny 25 %n' ny Malagasy dia Prôtestanta.
1.1 Vanimpotoana faha mpanjaka
1.1.1 Faha Radama I
1.1.2 Faha Ranavalona I
1.1.3 Taorian-dRanavalona I
1.2 Vanimpotoan' ny fanjanahan-tany (1896-1960)
1.2.1 Fotoana nisian' ny fahasahiranana (1896-1905)
1.2.2 Fotoan' ny fahalalahana (1905-1946)
1.2.3 Fiampagana tamin' ny raharaha 1947
1.2.4 Fanombohan' ny fampitambarana ny fiangonana
1.3 Amin' izao fahaleovan-tenam-pirenena izao
2 Ny sampan' ny prôtestantisma eto Madagasika
2.1 Ny fiangonana loterana
2.1.1 Ny Fiangonana Loterana Malagasy
2.1.2 Ny Fiangonana Loterana Malagasy Nohavaozina
2.1.3 Ny Fiangonana Fifohazam-Panahy Loterana Malagasy
2.1.4 Ny Fiangonana Prôtestanta Loterana Malagasy
2.1.5 Ny Fiangonana Loterana Sinoa
2.2 Ny fiangonana nohavaozina
2.2.1 Ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara
2.2.2 Ny Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara
2.2.3 Ny Fiangonana Malagasy Tranozozoro Antranobiriky
2.2.4 Ny Fiangonana Prôtestanta Vaovao eto Madagasikara
2.2.5 Ireo fiangonana nohavaozina hafa
2.3 Ny fiangonana anglikana
2.3.1 Ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM)
2.4 Ny fiangonana adventista
2.4.1 Ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito,
2.4.2 Ny Fiangonan' i Jehovah Tompon' ny Sabata andro faha-7
2.5 Ny fiangonana ara-pilazantsara
2.5.1 Ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
2.5.2 Ny Fiangonana Batista Finoana
2.5.3 Ny Fiangonana Batista ara-Pilazantsara
2.5.4 Ny Fiangonana Pentekôtista Mitambatra
2.5.5 Ny Fiangonan' Andriamanitra
2.5.6 Ny Fiangonana Jesosy Mamonjy
2.5.7 Ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara
2.5.8 Ireo fiagonana evanjelika hafa
2.6 Ny fikambanana sy ny fiombonana
2.6.1 Ny Fiombonan' ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara
2.6.2 Ny Fiombonan' ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara
2.6.3 Ny Fivondronan' ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
Vanimpotoana faha mpanjakaHanova
Faha Radama IHanova
Tamin'ny faramparan' ny taonjato faha-18 no nidiran' ny fivavahana prôtestanta eto Madagasikara. Ny fikambanana momba ny fitoriana ny Filazantsara sy nisahana koa fikarakarana ny maha olona nanomboka teo anelanelan' ny taona 1792 sy 1818, izay nipoitra avy amin' ny prôtestantisma britanika, no nanana tanjona hitory ny Filazantsara amin' ny olona ivelan' i Eorôpa. Isan'ireo fikambanana ireo ny London Missionary Society (LMS) izay nitondra ny prôtestantisma teto Madagasikara.
Tany amin' ny morontsiraka atsinanan' i Madagasikara any amin' ny faritra betsimisaraka no nivahinian' ireo misionera nalefan' ny LMS tamin' ny 18 Aogositra 1818, avy eo izy ireo nankany afovoan-tany. I David Jones sy i Thomas Bevan no nanomboka nitory ny Filazantsara tamin' ireo toerana manodidina an' i Toamasina. Nanorina ny sekoly prôtestanta voalohany tao Manangareza izy ireo tamin' ny taona 1818.
Maty vady aman-janaka ireo misionera ireo ka i David Jones irery no sisa nefa narary koa izy ka nandao an' i Madagasikara ho any Maorisy mba hitsabo tena tamin' ny taona 1820. Niverina tao Toamasina izy tamin' ny volana Septambra 1820 avy eo nankany Antananarivo niaraka tamin' i Hastie tamin' ny volana Oktobra 1820 fony nanjaka Radama I (nanjaka teo anelanelan’ ny taona 1810 sy 1828). Nanokatra sekoly tao Antananarivo i David Jones tamin' ny volana Desambra 1820. Nankasitraka ny fifandraisana amin' ny vahiny avy any ivelan' i Madagasikara ny mpanjaka Radama I ka nahafahan'ny misionera britanika nanorina sekoly sy nampiditra ny fivavahana kristiana teto amin'ny Nosy.
Faha Ranavalona IHanova
Nampitsahatra ny fifandraisana amin' ny avy any ivelany sy nanenjika ny Kristiana ny mpanjaka Ranavalona I (nanjaka teo anelanelan’ ny taona 1828 sy 1861), izay nandimby an-dRadama I. Nanjaka ny habibiana sy ny fandalana ny finoan-drazana malagasy (izay nataon' ny Kristiana hoe "finoanoam-poana") ary ny fankahalana vahiny tamin' izany fotoana izany.
Ny LMS dia afaka nandika ny Baiboly tamin' ny teny malagasy tamin' ny 01 Janoary 1827 ka ny toko voalohany amin' ny Filazantsaran' i Lioka no vita voalohany. Efa ao anatin' ny fisedrana ny fiangonana teto Madagasikara tamin' izany fotoana izany. Vita dika ny Testamenta Vaovao tamin' ny taona 1830. Vita dika manontolo ny Baiboly tamin' ny taona 1835. Vitan'i Baker sy Kitching fanontana printy ny Baiboly malagasy tamin' ny 21 Jona 1835.
Tamin' ny taona 1835 dia nambaran' ny mpanjaka Ranavalona I ny tsy fanekeny ny fisian’ ny fivavahana kristiana. Maro anefa ireo Malagasy mbola niaina tamin' ny maha kristiana azy ka niharan' ny fampijaliana sy famonoana ho faty. Voarara ny fananana Baiboly sy ny fanaovana batisa ary noroahina hody ny misionera.
Baiboly malagasy voalohany
Tamin' ny taona 1837 dia novonoina ny vehivavy atao hoe Rasalama noho ny tsy fivadihany tamin' ny finoany. Izy no martiora kristiana voalohany. Maro koa ny Kristiana hafa novonoina noho ny finoany. Tamin' ny taona 1849 no tena nafana ny fanenjehana ny Kristiana ka ao ny nodorana velona, ny notapahin-doha sy ny navarina amin' ny hantsana tao Ampamarinana.
Tamin' ny taona 1861, taona nahafatesan' ny mpanjaka Ranavalona I sy nandimbiasan-dRadama II azy, dia nahazo aina indray ny fivavahana kristiana teto Madagasikara ary niverina ny fifandraisana amin' ny any ivelany. Nanome fahalalahana ny finoana isan-karazany teo amin' ny fanjakany Radama II (nanjaka tao anelanelan’ny taona 1861 sy 1863).
Niditra teto Madagasikara koa ny Misiona katôlika tamin' izany taona 1861 izany. Nandroso ny fanorenana sekoly sy trano fiangonana ary trano fitsaboana nataon' ireo misionera sady namboarina ny lapan' ny mpanjaka. Tamin' io taona io dia nanomboka ny fifaninanana teo amin' ny misiona prôtestanta sy ny misiona katôlika.
Nandimby an-dRadama II vadiny izay nisy namono Rasoherina (nanjaka teo anelanelan’ ny taona 1863 sy 1868) tamin' ny taona 1863 ka amin' ny ankapobeny dia nihatsara hatrany ny fifandraisana amin' ny vahiny, isan' izany ny misionera. Tsy dia nankasitrahany anefa ny fifandraharana tamin' i Frantsa. Tonga teto tsy nisy mpanakantsakana ny misionera prôtestanta anglisy tao amin' ireo fikambanana toa:
ny Misiona anglikana, dia ny Church Missionary Society (CMS) sy ny Society for the Propagation of the Gospel (SPG) izay tonga taminny taona 1864;
ny Misiona loterana nôrveziana, dia ny Norvegian Missionary Society (NMS) (nôrveziana: Norsk Misjonsselskap) tamin' ny taona 1866, ka isan' ny misionera tonga teto i John Engh sy i Niels Nilsen;
ny Misiona frenjy, Friends of Foreign Mission Association (FFMA) tamin’ ny taona 1867.
Namoaka didy momba ny famerenana ny fivavahana kristiana ny mpanjakavavy Ranavalona II (nanjaka teo anelanelan' ny taona 1883 sy 1896), izay nandimby an-dRasoherina. Natao batisa tamin' ny taona 1869 izy rehefa avy niova finoana ho prôtestanta ka tsy nekeny ny fivavahan-drazana sady nataony fivavaham-panjakana ny prôtestantisma.
Nifanohana ny Prôtestanta anglisy sy ny Prôtestanta frantsay ka nandroso lavitra ny prôtestantisma teto Madagasikara raha mitaha amin' ny katôlisisma na dia nampian' ny fanjakana frantsay aza. Ny ankamaroan' ny mpino prôtestanta anefa dia mpanara-drian-drano, "mpanao rebik' ondry", tamin' izany fotoana izany.
Tamin' ny taona 1883 dia efa nanomboka niatrika ady amin’ i Frantsa ny tafika malagasy. Nitombo tanjaka hatrany ny Prôtestanta tamin’ ny nahatongavan' ny misionera loterana avy amin' ny Lutherian Church of America (LCA) tamin’ ny taona 1888 sy ny Lutherian Board of Mission (LBM) tamin' ny taona 1890. Nanenika ny Nosy ny fitorian' ny Prôtestanta ny Filazantsara ka ny Nôrveziana sy ny Amerikana nankany amin' ny tapany atsimon' ny Nosy fa ny Anglisy kosa nijanona tao afovoan-tany sy tany amin' ny morontsiraka atsinanana.
Resy ny tafika malagasy tamin' ny taona 1986 ka niandry izay hataon' ny Vazaha nahazo fahefana ny Kristiana malagasy mbamin' ireo misionera ary ny Malagasy hafa rehetra.
Nankahery ara-panahy ny mpino prôtestanta ny fiorenan' ny tobim-pifohazan' i Soatanàna tamin' ny taona 1894 notarihin' i Rainisoalambo.
Nisy ny fiampangana ny misionera heverina ho mpiray tsikombakomba tamin' ny Frantsay (fiampangan' ny Malagasy, indrindra ny Menalamba) na tamin' ny Anglisy (fiampangan' ny Frantsay). Maty nisy namono ny misionera toa an-dry William sy Lucy ary Bloson Johnson tany Arivonimamo tamin' ny taona 1895.
Vanimpotoan' ny fanjanahan-tany (1896-1960)Hanova
Fotoana nisian' ny fahasahiranana (1896-1905)Hanova
Lasa zanatanin' i Frantsa i Madagasikara tamin' ny taona 1897 nefa tsy nanohana ny misiona katôlika i Galliéni na dia tsy nanavakavaka fivavahana.
Tsy nahomby nihoatra ny Prôtestanta ny Katôlika noho ny antony maro, ka isan' izany ny tsy fahafahan' ny Malagasy katôlika mamaky Baiboly. Sahirana ny Prôtestanta tamin' ny fotoana nanombohan' ny fanjanahan-tany noho ny nataon' ireo Zezoita (frantsay: Jésuites) izay nampifangaro ny raharaha pôlitika sy ny raharaham-pivavahana ka nanao ny Prôtestanta ho sakaizan' ny Anglisy sy ho fahavalon' ny Frantsay. Nandefa iraka ny misiona prôtestanta avy any Parisy, dia ny Mission Protestante Française (MPF) na Société des Missions Evangéliques de Paris (SMEP) tamin' ny taona 1897 noho ny fitadiavana fanampiana nataon’ ny LMS. Ny misoneran' ny MPF tonga tamin’ izay dia i Lauga sy i Kruger ary i Benjamin Escandre.
Maro ireo mpino prôtestanta niala amin’ ny fiangonany noho ny tahotra. Betsaka koa ny trano fiangonana protestanta nalain’ ny misionera katôlika ho azy na narodana. Naverina tamin’ ny Prôtestanta ihany izy ireo taty aoriana afa-tsy ny fiangonana tao amin' ny faritr' Ambatomanga.
Fotoan' ny fahalalahana (1905-1946)Hanova
Teraka ny fiombonan' ny fiangonana prôtestanta, izay atao hoe Komity Intermisionera, iraisan' ny misiona prôtestanta enina (ny London Missionary Society, ny Friends of Foreign Mission Association, ny Mission Protestante Française, ny Norvegian Missionary Society, ny Lutherian Church of America, ny Lutherian Board of Mission) izay hatao hoe Fiombonan'ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM) aty aoriana (anglisy: Federation of the Protestante Churchs in Madagascar) tamin' ny taona 1913 nefa ny Anglikana tsy niditra ao. Tamin’ io taona 1950 io dia niova anarana ny Komity Intermisonera ka lasa Komitin' ny Prôtestanta.
Nisongadina tamin' ny fanoherana ny mpanjana-tany ny Prôtestanta. Ireo avara-pianarana malagasy, indrindra ny mpitsabo sy ny pastora, dia nivondrona tanaty fikambanana talohan' ny taona 1920, dia ny Vy, Vato, Sakelika (VVS). Prôtestanta ny ankamaroany. Nisy koa antoko pôlitika izay nitaky ny fizakantena sy ny fahaleovantenan' i Madagasikara, dia ny Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache (MDRM) niorina tamin’ ny 22 Septambra 1946, dia nahitana mpikambana prôtestanta koa.
Tonga teto Madagasikara ny misionera adventista tamin' ny taona 1926 nefa tsy nety niara-niasa tamin' ny misionera prôtestanta efa tratrany. Niorina ny tobim-pifohazam-panahy tamin’ ny taona 1927 tao Manolotrony notarihin-dRavelonjanahary. Tonga teto Madagasikara ny finoana batista tamin' ny alalan' ny Misiona Biblikan' i Madagasikara tamin' ny taona 1932. Efa nahatsangana ny sinôdany ny fiangonana anglikana tamin’ ny taona 1937.
Niorina ny tobim-pifohazam-panahy tamin’ ny taona 1942 tao Ankaramalaza notarihin' i Volahavana Germaine (na Nenilava). Nankahery ara-panahy ny mpino prôtestanta ny fiorenan' ny tobim-pifohazan' i Farihimena tamin' ny taona 1946 notarihin-dRakotozandry Daniel.
Fiampagana tamin' ny raharaha 1947Hanova
Maro ny Prôtestanta nampangaina ho niray tetika tamin' ny mpanohitra ny fanjakana frantsay. Maro toraka izany koa ny trano fiangonana prôtestanta noravan' ny Farantsay. Nanampy ny fiangonana prôtestanta malagasy ny Prôtestanta tany Frantsa tamin' ny nandefasany an' i Marc Boegner sy i André Roux ary i Charles Bonzon izay samy mpitandrina. Tetsy an-daniny koa dia niampanga ny Kristiana ho mpiray tsikombakomba tamin' ny Vazaha ny fikambanana mpanafaka tanindrazana MDRM ka lasa "fahavalon' ny fiangonana" noho ny fanimbany sy ny fandrobany ny trano fiangonana tamin' ny faritra sasany teto Madagasikara izy io.
Fanombohan' ny fampitambarana ny fiangonanaHanova
Tamin' ny taona 1950 dia niforona ny komitin' ny firaisana niarahan' ny Malagasy sy ireo misiona britanika (ny LMS sy ny FFMA ary ny MPF). Tamin' io taona io ihany dia nitambatra ny fiangonana nentin' ireo misionera nôrveziana (ny Norwegian Missionary Society) sy amerikana (ny American Lutheran Church sy ny Lutherian Board of Mission) ka nitondra ny anarana hoe Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) ka efa nanana sinôdam-paritany enina.
Tamin' ny taona 1958 dia niova anarana amin' ny teny malagasy ny fiangonan' ny misionera anglisy sy frantsay ka ny FFMA niova ho Fiangonana Frenjy Malagasy (FFM) tamin' ny taona 1958, ny MPF niova ho Fiangonana ara-Pilazantsara eto Madagasika (FPM) tamin' ny taona 1960, ny LMS niova ho Fiangonan' i Kristy eto Madagasikara (FKM) tamin' ny taona 1962  .
Nandritra ny fanjanahan-tany dia ny LMS sy ny FFMA (ny Quakers na Friends) no misiona tena natanjaka ka nitambatra tamin' ny misiona prôtestanta frantsay sy ny misiona loterana izy ireo talohan' ny taona 1960 ka nanangana ny Fédération des Églises Protestantes de Madagascar (na Fiombonan' ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara - FFPM).
Amin' izao fahaleovan-tenam-pirenena izaoHanova
Tamin' ny taona 1968 dia tonga fiangonana iray nomena ny anarana hoe Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) ny fikambanan' ny fiangonana telo nohavaozina, dia ny Fiangonana Frenjy Malagasy sy ny Fiangonana ara-Pilazantsara eto Madagasika ary ny Fiangonan' i Kristy eto Madagasikara. Niforona koa ny fiangonana anglikana, dia ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM) tamin’ ny taona 1969.
Ny sampan' ny prôtestantisma eto MadagasikaHanova
Ny fiangonana loteranaHanova
Ny Fiangonana Loterana MalagasyHanova
Ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM), dia fiangonana vokatry ny fitoriana ny Filazantsara nataon' ireo misionera avy tamin' ny Misiona Nôrveziana (anglisy: Norwegian Missionary Society - NMS) nanomboka ny taona 1866 sy ny Misiona Amerikana (Americana Lutheran Church - ALC) nanomboka tamin' ny taona 1888. Tamin' ny taona 1950 anefa vao nahazo fahaleovan-tena io fiangonana io.
Ny Fiangonana Loterana Malagasy NohavaozinaHanova
Ny Fiangonana Loterana Malagasy Nohavaozina (FLMN) dia iray amin' ny sampan' ny fiangonana loterana misy eto Madagasikara izay tafasaraka tamin' ny FLM tany amin' ireo taona 70 noho ny tsy fifanarahana momba ny fomba fitantanana ny fiangonana.
Ny Fiangonana Fifohazam-Panahy Loterana MalagasyHanova
Ny Fiangonana Fifohazam-Panahy Loterana Malagasy (FFPLM) naorin' ilay mpiandry atao hoe Mama Olga. Ao Anolaka any Fianarantsoa no misy ny foibeny.
Ny Fiangonana Prôtestanta Loterana MalagasyHanova
Ny Fiangonana Prôtestanta Loterana Malagasy (FPLM). Ao Ankofafa any Fianarantsoa ny misy ny foibeny.
Ny Fiangonana Loterana SinoaHanova
Ny Fiangonana Loterana Sinoa dia fiangonana loterana anatanterahan' ireo teratany sinoa loterana ny fanompoam-pivavahany.
Ny fiangonana nohavaozinaHanova
Ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto MadagasikaraHanova
Ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) dia niforona vokatry ny fitambaran' ny fiangonana telo notarihin' ny London Missionary Society (tonga teto tamin' ny taona 1818) ny Société des Missions Evangeliques de Paris (tonga teto tamin' ny taona 1867) ary ny Frends Foreign Missionary Association (tonga teto tamin' ny taona 1897). Tamin' ny taona 1968 vao nitondra io anarany FJKM io ity fiangonana ity.
Ny Misiona Evanjelika Teratany eto MadagasikaraHanova
Ny Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara (METM) dia fiangonana naorin' ny Pastora Rakotobe Andriamaro tamin’ ny taona 1955.
Ny Fiangonana Malagasy Tranozozoro AntranobirikyHanova
Ny Fiangonana Malagasy Tranozozoro Antranobiriky (FMTA) dia fiangonana niala tamin' ny London Missionary Society (LMS) tamin' ny taona 1894. Ny Pastora Rajaonary no nitantana an' io fiangonana voalohany.
Ny Fiangonana Prôtestanta Vaovao eto MadagasikaraHanova
Ny Fiangonana Prôtestanta Vaovao eto Madagasikara (FPVM) dia fiangonana niala avy amin' ny FJKM, naorin' ny Mpitandrina Randrianantoandro Jean Joseph tamin' ny taona 2002.
Ireo fiangonana nohavaozina hafaHanova
Ireto no ngezangeza amin' ireo fiangonana ireo:
ny Fiangonana Kristiana Prôtestanta Malagasy Vavolombelona, niorina tamin' ny taona 1967.
ny Fiangonana Kristianina Fifohazana eto Madagasikara (FKFM)
ny Fiangonan' ny Fifohazan' ny Mpianatry ny Tompo, niorina tamin' ny taona 1954
ny Fiangonan' ny Fifohazam-Panahy Malagasy, niorina tamin' ny taona 1963/64.
Ny fiangonana anglikanaHanova
Ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM)Hanova
Ny anglikanisma eto Madagasikara dia hita amin' ny alalan' ny Eklesia Episkopaly Malagasy, hafohezina amin' ny hoe EEM. Azo lazaina ho niorina tamin' ny taona 1864 na 1969 ny EEM.
Ny fiangonana adventistaHanova
Ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito,Hanova
Ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara dia niorina teto tamin' ny taona 1927. Misionera avy ao amin' ny nosy Maorisy no nitondra ny adventisma teto Madagasikara tamin' ny taona 1910.
Ny Fiangonan' i Jehovah Tompon' ny Sabata andro faha-7Hanova
Ny Fiangonan' i Jehovah Tompon' ny Sabata andro faha-7 (FJTSa7).
Ny fiangonana ara-pilazantsaraHanova
Ny Fiangonana Batista Biblika eto MadagasikaraHanova
Tonga teto amin' ny Nosy tamin' ny alalan'ny Misiona Biblikan' i Madagasikara tamin' ny taona 1932 ny finoana batista. Ny trano fiangonana batista voaorina voalohany dia ny ao Ankadivato tamin' ny taona 1935. Novana anarana ka natao hoe "Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara" tamin' ny taona 1963 ny fiangonanana najoron' ny Misiona Biblikan' i Madagasikara.
Ny Fiangonana Batista FinoanaHanova
Ny Fiangonana Batista Finoana dia iray amin' ireo sampan' ny batisma eto Madagasikara.
Ny Fiangonana Batista ara-PilazantsaraHanova
Ny Fiangonana Batista ara-Pilazantsara dia iray amin' ireo sampan' ny batisma eto Madagasikara.
Ny Fiangonana Pentekôtista MitambatraHanova
Ny Fiangonana Pentekôtista Mitambatra dia fiangonana naorin' ny misionera Chris Richardson mivady tamin' ny taona 1970. Ny tobin' io fiangonana io dia ao Ambohidratrimo Antananarivo.
Ny Fiangonan' AndriamanitraHanova
Ny Fiangonan' Andriamanitra (na Assemblée de Dieu) dia fiangonana ara-pilazantsara niorina teto Madagasikara tamin' ny taona 1967.
Ny Fiangonana Jesosy MamonjyHanova
Ny Fiangonana Jesosy Mamonjy dia fiangonana niorina ara-panjakana tamin' ny 1963 teto Madagasikara taorian' ny asa fitoriana Filazantsara nataon' ny misionera amerikana Mounir Aziz Daoud sy Jane Collins vadiny. Ao Ankorondrano, Antananarivo no misy ny foibeny.
Ny Fiangonana Apokalypsy eto MadagasikaraHanova
Ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara (FAM) dia fiangonana natsangan' i pasitera Mailhol André Christian Dieu Donné tamin' ny taona 1996 izay mifototra manokana amin' ny fanazavana sy fampianarana ny misiterin' ny bokin' ny Apokalypsy. Rehefa niitatra any ivelan' i Madagasikara io fiangonana io dia niova anarana ka atsoina hoe Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany (izay hafohezina amin' ny hoe FAM ihany).
Ireo fiagonana evanjelika hafaHanova
Mitombo isa hatrany ny fiangonana ara-pilazantsara sy petekotista, ka ireto ny sasany amin' izany:
ny Tafik'i Jesosy Kristy (TAJEKRI)
Ny fikambanana sy ny fiombonanaHanova
Ny Fiombonan' ny Fiangonana Protestanta eto MadagasikaraHanova
Mikambana ao amin' ny Fiombonan' ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM) ireo fiangonana protestanta lehibe roa dia ny ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Izany fiombonana izany dia tanterahina amin' ny fiaraha-mivavaka sy fananganana sehatra na fotodrafitrasa iraisana ara-tsôsialy (indrindra ny fampianarana sy ny fitsaboana). Samy mampiasa ny Baiboly prôtestanta ireo Fiangonana ireo ary iombonany koa ny fampiasana boky fihirana sy tiona FFPM. Manana ny lalàm-panorenany manokana sy ny fitsipi-piaraha-miasany ary ny biraony ny FFPM.
Ny Fiombonan' ny Fiangonana Kristiana eto MadagasikaraHanova
Ny FJKM sy ny FLM ary ny EEM dia mpikambana ao amin' ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) miaraka amin'ny Eglizy Katôlika Apôstolika Rômanina (EKAR).
Ny Fivondronan' ny Fiangonana Batista Biblika eto MadagasikaraHanova
Manana ny fikambanany koa ireo fiangonana mitovy firehana ka isan' izany ny Fivondronan' ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara (FFBBM) izay mamondrona ireo fiangonana batista biblika eto amin' ny Nosy.
Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy
↑ Bureau of African Affairs (3 May 2011). "Background Note: Madagascar". U.S. Department of State.
↑ 2,0 et 2,1 Tantaran'ny FJKM: http://fjkmrenneslaval.com/sp-vfa37/tantaranny-fjkm/
↑ Tsy tena nilaina ny hamakiana izany satria tsy neken'ny Papa ho vakina; tsy mbola voadika amin'ny teny malagasy rahateo ny Baiboly katolika; ny toriteny na ny vakiteny dia nataon'ny misionera katolika ho tsara kokoa raha atao amin'ny teny latina na dia tsy tafita amin'ny Malagasy aza izany.
↑ J. Rabemanahaka, J. Rennes, G. Razafindrakoto, "Calvin - ny Andro moderna", ao amin'ny Tantaran'ny Fiangonana, 1964, p.69
↑ J. Rabemanahaka, J. Rennes, G. Razafindrakoto, "Calvin - ny Andro moderna", ao amin'ny Tantaran'ny Fiangonana, 1964, p.70.
↑ 6,0 et 6,1 J. Rabemanahaka, J. Rennes, G. Razafindrakoto, "Calvin - ny Andro moderna", ao amin'ny Tantaran'ny Fiangonana, 1964, p.71
↑ Raminosoa Marcel (Mpandridra), Inona moa ny FFPM ?, Antananarivo, 2003, p. 1.
↑ 8,0 et 8,1 FJKM Rennes-Laval "Tantaran'ny FJKM: 45 taona"
↑ Fjkm-ambalavaoisotry "Tsiahy ny tantaran'ny FJKM" Archived Janoary 11, 2019 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Prôtestantisma_eto_Madagasikara&oldid=1043933"
Dernière modification le 12 Febroary 2022, à 06:55
Voaova farany tamin'ny 12 Febroary 2022 amin'ny 06:55 ity pejy ity.